I-Global Pharmaceuticals Supplier - Global Medicals®
Yiba Nombuzo Nge-E-mail Us [i-imeyili ivikelwe]
Iziphesheli zezitolo ezinkulu
Uma ungenayo i-akhawunti yomuntu siqu sicela ubhalise
Sebenzisa i-imeyili yakho ukuze ungene
Uma une-akhawunti yomuntu siqu, sicela ungene ngemvume
Sebenzisa i-imeyili yakho ukuze ubhalise
Ikalishi lokuthenga ( 0 )
Unayo Into engu-0 Enqoleni Yakho
I-GLOBAL MEDICALS® Global Pharmaceuticals Supplier. Pharmaceuticals
I-Global Medicals®: Umhlinzeki Wemithi Ethengisa Izimpahla Ezithengiswayo
Ukuthengiswa kwemithi edayiswayo yibhizinisi elikhulu elinabathengisi nabathengisi abaningi abaziwayo nabathembekile. Kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo yemithi ethengiswa kakhulu esiyidayisela amakhasimende emhlabeni jikelele okuhlanganisa nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba, wemithi kadokotela like ama-opioid, amanabukeni alahlwayo, ama-antibiotics nezinye izinsiza zokwelapha. Izintengo zale mikhiqizo ziyahlukahluka kuye ngenani eli-odiwe, indawo okuthunyelwa kuyo kanye nesimo sekhasimende.
Sinikezela ngokulinganayo ngezinsizakalo zokubonisana nge-inthanethi ngokugxila emikhiqizweni namasevisi esiwanikezayo nokuthi angakusiza kanjani kangcono. Ukuthenga imikhiqizo yemithi ku-inthanethi ezitolo ezingaziwa kuyingozi njengoba ungavamile ukuqiniseka ngekhwalithi yomkhiqizo owutholayo. Lapha kwa-Global Medicals®, sisebenzelana kuphela nemikhiqizo yemithi yeBanga A, engenakho ukuphazamiseka nokuphinga. Sihlala sinikeza amakhasimende ethu izeluleko zamahhala namathiphu okuthi ungabona kanjani kangcono umphakeli ofanele we-wholesale nokuthi uthenge kanjani ku-inthanethi ukuze uqiniseke ukuthi uthola lokho oku-ode ngakho.
Imikhiqizo yemithi yekhwalithi ephezulu etholakalayo njengamanje ukuze ithengiswe ngamanani okuthengisa namawholesale.
I-Global Medicals® inikeza amakhasimende amanje nawesikhathi esizayo izinsizakalo zokubonisana zezokwelapha zamahhala.
Sihlinzeka ngenqwaba yezinsizakalo zezokwelapha ezifiselekayo nezifunwa kakhulu.
Thola izibuyekezo zakamuva zezokwelapha nokunye okwengeziwe kubhulogi yethu, kugcizelelwa emikhiqizweni yezemithi nezinsiza.
Ngu- Milton Ford
Ngabe Imboni Yezemithi ngo-2021 Izosabela Kanjani Kubuchwepheshe obusha?
Ngo-2021 imboni yemithi izoba yindawo ehluke kakhulu kulokho okuyikho manje. Ihambe kanjani
Ungathenga Kanjani Ekhemisi Lendawo
Akunandaba ukuthi uhlala kuphi e-United States, kungenzeka ukuthi ube munye
Izinzuzo Zemithi Ye-Opioid
Kungase kube isilingo kuwe noma othandekayo wakho ukuthi anikeze ama-opioid ukuze ekwelaphe ubuhlungu obungapheli. Kodwa
Thola izibuyekezo zakamuva ngemikhiqizo yethu yezemithi, amadili ezitolo ezinkulu namabhonasi lapho ubhalisa.
I-Global Medicals® ingumholi womhlaba wonke ekuthengisweni nasekusatshalalisweni kwemikhiqizo yezemithi, izinsiza zokwelapha kanye nezinsizakalo zezokwelapha.
Imithi Yokulwa Nokubhema
Copyright © 2021 Global Medicals®. Wonke Amalungelo Agodliwe.